Sebenzisa i-DMP kubonelela ngeengcombolo zedatha eyongezelelweyo kubathengisi, ngelixa ukonyusa umgangatho kunye ne-CPM yempembelelo ebonelelweyo. Idatha igolide entsha. Makhe siqwalasele owona mba uphambili wokuququzelela idatha yabapapashi kunye nokukhetha umboneleli wezobuchwephesha onokulingana iimfuno zeshishini zeentlobo ezahlukeneyo zabapapashi.
Ngelixa ukhetha i-DMP, qaphela zonke izakhono zobugcisa ezikhoyo, ukuze ukudityaniswa kungabi luxanduva kwiqela lakho lobuchwephesha. Udinga iqonga elinokuhambisa ngokufanelekileyo ukusebenza okuphambili: ukuqokelelwa, ukwahlulwahlulwa, uhlalutyo, kunye nokwenza imali kwedatha.